Faransiiska: Dagaallo iyo xarig ayaa ka dhacay Paris iyadoo kumanaan qof ay xusaan Maalinta May - Wardeeq 24 TV Faransiiska: Dagaallo iyo xarig ayaa ka dhacay Paris iyadoo kumanaan qof ay xusaan Maalinta May Wardeeq 24 TV
Home Warar-ka Dunida Faransiiska: Dagaallo iyo xarig ayaa ka dhacay Paris iyadoo kumanaan qof ay...
Faransiiska: Dagaallo iyo xarig ayaa ka dhacay Paris iyadoo kumanaan qof ay xusaan Maalinta May
Dibadbaxayaasha Hooded, oo dharka madow xidhan ayaa isku dhacay booliska magaalada Paris iyadoo kumanaan dad ah ay ku biireen mudaaharaadyada looga dabaaldego maalinta May ee guud ahaan Faransiiska si looga dalbado caddaalad bulsho iyo dhaqaale isla markaana ay uga soo horjeedaan qorshooyinka dowladda ee wax looga beddelayo dheefaha shaqo la’aanta.
Booliska ayaa Sabtidii qabtay 46 qof caasimada, halkaas oo qashinka lagu gubay iyo daaqadaha laanta bangiga oo la jajabiyay, taas oo inyar dib u dhigtay socodkii. Maamulka ayaa sidoo kale ka warbixiyay shan xarig iyo 27 sarkaal oo booliis ah oo lagu dhaawacay magaalada Lyon. Laakiin inta badan tobanaan socod oo Faransiiska ah waxay dhaafeen dhibaato la’aan.
Dibadbaxayaasha Maalinta May waxay dalbanayaan xuquuqda shaqaalaha iyada oo ay jiraan aafo
Faransiiska, Talyaanigu waxay soo rogaan xirxirista Easter maadaama kiisaska COVID ay sii kordhayaan
Faransiiska ayaa ku dhawaaqay xiritaanka iskuulka seddex todobaad, xayiraada socdaalka gudaha
Dhowr waddan oo Yurub ah ayaa ballaadhiyey waddooyinka COVID; Faransiiska ‘muhiim’
In ka badan 106,000 oo qof ayaa socod ku soo maray guud ahaan Faransiiska, oo ay ku jiraan 17,000 magaalada Paris, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha.
Ururada shaqaalaha waxay ku biireen xubno ka tirsan dhaqdhaqaaqa Yellow Vest, oo kiciyay mowjado mudaaharaadyo looga soo horjeedo dowladda seddex sano ka hor, iyo shaqaale ka socda qeybaha ay si xun u saameeyeen xayiraadaha faafa sida dhaqanka.
Maraakiibta, oo intabadan xirta maaskaro si waafaqsan sharciyada coronavirus, waxay wateen boorar ay ku qoran yihiin, “Kala qaybsanaanta, ma ahan faa’iidooyinka shaqo la’aanta ayaa ah dakhliga dadka caajiska ah” iyo “Waxaan dooneynaa inaan noolaano, ma noolaano”.
“Marka laga hadlayo sababta ay dadku ugu soo baxeen waddada, waxaa jiray arrimo iyo sababo kala duwan; wax walba laga bilaabo isbeddelka cimilada illaa dadka u maleynaya in dowladdu aysan sameyn wax ku filan intii lagu jiray aafada ilaa ururada shaqaalaha ee ku baaqaya in la siiyo mushaar wanaagsan iyo xaaladaha shaqada oo ka wanaagsan, ”ayay tiri Natacha Butler oo ka tirsan Al Jazeera, oo ka soo warramaysa Paris.
Hawlgab magaceeda u bixisay Patricia wakaaladda wararka ee AFP ayaa tiri: “Waxaa jira waxyaabo badan oo dhiirigelin u ah kacdoon dhismaya – maaraynta COVID, waxa loogu yeero dib-u-habeyn lagu doonayo in looga qaado dadka awoodooda nololeed, shaqo – kuwa raadinaya faa’iidooyinkooda.
“Waxaan gabi ahaanba ubaahanahay inaan is muujino,” ayuu yiri 66 jirkaan.
Previous articleDib u gurasho Afqaanistaan: Mareykanku wuxuu bilaabay inuu ka baxo dagaalkiisi ugu dheeraa
Next articleRooble “Xukuumadda waxay soo bandhigi doontaa qorsheyaasha doorashooyinka”